Xarakada Al-Shabaab Oo War kasoo saartay Weerarkii Wajeer.(Bayaan) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Xarakada Al-Shabaab Oo War kasoo saartay Weerarkii Wajeer.(Bayaan)
Last updated Dec 7, 2019 677 0
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa war rasmi ah kasoo saartay weerar rag katirsan ciidamdeeda ay ka fuliyeen deegaan hoostaga gobolka Wajeer oo kamid ah dhulka NFD ee ku jira gumeysiga dowladda Kenya.
Bayaan ku qoran luuqadda English-ka oo uu ku saxiixanyahay Sheekh Cabdil-Caziiz Abuu Muscab, afhayeenka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in gelinkii dambe ee maalintii shalay oo Jimco ahayd ay Mujaahidiintu ka fuliyeen dhulka NFD weerar lagu dilay dad Kenyaati ah.
” Galabnimadii Jimcaha oo ay taariikhdu ahayd 09 Rabiicu thaani 1441 Hijri, kuna beegnayd 06/12/2019, Ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa hawlgal ka fuliyay gobolka Wajeer ee ka tirsan dhulka Muslimiinta lahaysto ee NFD. Hawlgalka oo dhacay saacaddu markii ay ahayd 17:00 galabnimo, waxaa lagu dilay 10 Saliibiyiin ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan hay’adaha sirdoonka qarsoon iyo shaqaalaha dowladda” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
War saxaafadeedka ayaa intaas ku daray ” Saliibiyiintu waxay ka yimaadeen dhanka Magaalada Nayroobi, waxayna kusoo jeedeen Magaalada Mandheera si ay usii xoojiyaan deegaameeynta kirishtaanka ee dhulkaas Muslimiinta ee xoogga lagu haysto, ayna sii wadaan falalkooda gurracan iyo inay sii faafiyaan ujeedooyinkooda sumaysan ee dhanka ah Muslimiinta”.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay shaaca ka qaaday in weerarkii Wajeer uu farriin kale u yahay dowladda Kenya, taas oo ah in muwaadiniinteeda aaney ku nabad geli doonin dhulka ay Muslimiinta xooga kaga heystaan.
” Weerarkan wuxuu farriin kale u yahay dowladdaa gaalada ah ee Kenya, fariintaas oo ah in shacabkeeda Saliibiyiinta ah aysan nabadgelyo kunaalloon doonin inta ay dowladoodu gumaysi kusii haysato dhulalka Muslimiinta, boobayso khayraadkooda ayna dulminayso dadka Muslimiinta ah”.
Gelinkii dambe ee maalintii shalay ayay ahayd, markii ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay wadada u galeen gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad Kenyaati ah.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa kala soocay dadkii, iyadooona la badbaadiyay dadkii Muslimiinta ahaa, waxaana goobta la dhigay 10 ruux oo Kenyaati ah, kuwaas oo qaarkood ay ahaayeen xubno katirsan Sirdoonka dowladda Kenya.
Halkan ka akhriso bayaanka oo ku qoran luuqadda English-ka.